Kupfeka Tafura Fekitori - China Kupfeka Tafura Vagadziri, Vatengesi
YF-T19 Nhema Fold-up girazi
Iyo yepamusoro ine makamuri matatu ane flip-yepamusoro girazi muchikamu chepakati. Iyo flip-yepamusoro cubby kudivi rega rega rezvisina maturo inopa yakawanda nzvimbo yekuchengetedza zvigadzirwa kana yekugezesa chimbuzi.
YF-T13 Yakakwira gloss Mirror Mberi yepamusoro Simudza Vanoshaya Set
Inozivikanwa neyakachena, yakatsetseka desktop uye yakakomberedzwa makumbo, ino yemazuvano yekuita zvisina maturo yakagadzika inowirirana neinoyevedza cheya uye girazi rakajeka zvakakwana kupenya ane nyasha hunhu! Iine inopenya yegoridhe kupedzisa uye yakatenderera girazi, chidimbu ichi chinopa dhizaini rinotarisisa.
YF-T7 Makeup Vanity TafuraLarge Mirror & Cabinet & DhirowaTribesigns Vanity Makeup Tafura
Iyo yakasarudzika dhizaini dhizaini, inouya neisina maturo, inochinja inopenya girazi, yakakwenenzverwa chituru uye yemahara yekugadzira murongi. Izvo hazvina maturo zvine mbiri rakakura dhirowa iro rinogonesa yako inodikanwa isina maturo yakakosha uye zvishongo. Iyi tafura isina maturo uye seto set inogona kushandiswa mune yako yekurara, yekugezera, kabhodhi kana nzira yekupinda.
YF-S1 Oak Compact Vanity Tafura
Takazvipira kugadzira tafura yakaoma uye inoshanda yekugadzira uye nekukupa iwe nesarudzo iri nani. Iyi chena yekugadzira tafura seti yakagadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro zvekugadzirisa kudzikama nekusimba 100%…
Vanity Set neTouch Screen Mirror
Madhirowa maviri ekuchengetera anopa nzvimbo yemabhurashi, makeup, moisturizers nezvimwe.
Humanized mhete mubato magadzirirwo inoita mudhirowa chinja nyore.
YF-T24 zvishongo kabhini BEDROOM VANITY
Asymmetrical dhizaini ine mitsara yakachena, uye chena & girini toni zvinopa yakashongedzwa asi yakashongedzwa vibe kumba kwako. Yakanaka yekupfeka tafura yakatsaurirwa kune yechikadzi nyika.
YF-T23 Dhirowa hombe Makeup Vanity + TV stand cabinet
Izvo zvisina maturo seti inoshanda seTV inomira neFlip Up girazi pamusoro.
Multi-inoshanda-Kune inokwana nzvimbo yekugadzirisa kwemazuva ese uye yekugera misoro ine 2 Dhirowa & 4 Masherufu. Tafura yacho zvakare inogona kushandiswa seyakaimira TV
YF-T22 inoyevedza uye inoshanda Makeup Vanity + TV yakamira kabhineti
Yakakwirira gloss chena huni dhizaina isina maturo tafura uye chigaro zviri nyore kuenzanisa yako yekushongedza imba, iyo tafura yepamusoro ine chena kupera iyo inowedzeredzwa neyegoridhe trestle base.
YF-T21 Yakakwira gloss Makuru Makeup Vanity + TV yakamira kabhineti
Iyo isina maturo seti inoshanda seTV kumira ine LED girazi pamusoro.Iyi yakangwara, yemazuva ano mupfeki ane inoenderana chituru isarudzo yakanaka kune yemazuva ano yekurara.
YF-T20 Makuru Makeup Vanity + TV yakamira kabhineti
Iyo isina maturo seti inoshanda seTV inomira ine LED girazi pamusoro.
Yakakwirira gloss chena huni dhizaina isina maturo tafura uye chigaro zviri nyore kuenzanisa yako yekushongedza imba Iyo yakafara tafura yepamusoro ine yakawanda nzvimbo yevarongeri vadiki, zvirimwa, kana mukombe wemabhurashi.
YF-T18 inokupa yakakwana nzvimbo velvet maturo
Kuvakwa kwesimbi, faux marble, huni hwakasimba uye PU dehwe kunovimbisa rutsigiro rwakasimba, kushandiswa kwakasimba uye ruzivo rwekunyaradza kwemakore anouya.Iyi tafura ine mitsara yakachena, inopenya, uye iyo Hollywood Mirror inoisa nzvimbo ine simba, asi yakashongedzwa, Makeup. Mira chaimo mumba mako.
YF-T17 yakakwana kune zvidiki nzvimbo Vanity tafura
White Vanity Makeup Tafura Yakagadziriswa neAdjustable Kupenya Mirror, Yakakwenenzverwa Stool uye Yemahara Make-up Murongi. Iwe unogona kusarudza mwenje wakasiyana zvinoenderana nezviitiko zvakasiyana uye zvigadzirwa zvakasiyana.